Waa qayb kamid ah nuxurkii heshiiskii DP World ee laga ansixiyay golaha wakiiladda. – Kaydka Xogaha Dahsoon Iyo Xaqiiqooyinka Foolaad.com
HomeOGAALKA DAHSOONWaa qayb kamid ah nuxurkii heshiiskii DP World ee laga ansixiyay golaha wakiiladda.
July 6, 2021 Admin@ OGAALKA DAHSOON 0
Heerka_Maalgalinta_ay_Samaynayso_DP World (The Level of Investment from DP World)
DP World waxay soo jeedisay in inay horumariso, balaadhisana awooda Dakada Berbera. Dakada Berbera hadda waxay awood u leedahay inay maareyso 150,000 tan oo kontaynar, taasi oo DP World rabto inay gaadhsiiso 1,250,000 oo tan oo kontaynar. Balaadhintu waxay diirada saaraysa koontiinarada iyo xaqiijinta maareynta badeecadaha kale.
Maalgalinta horumarineed ee dakudu waxay ku kacaysaa kharash dhan $440 oo milyan oo lagu dhamaystiri doono 3 waji:
• Maalgalin aan ka badnayn illaa $190 milyan • Dhismaha 400 oo mitir oo la dhigo kontiinarada iyo alaabaha kale; • Balaadhinta 25 hictar; • 5 Mashiin alaabaha lagu dajiyo laguna raro; • 18 ITV; • Saddex Wiish oo wareega (Three mobile harbour cranes); • 3 wiish ah oo ah nooca koontiinarada xambaara (3 ship to shore gantry cranes); • 7 wiish oo taayiro rabadh ah leh oo alaabaha xambaar (7 rubber tired gantry cranes);
• Diyaarinta nidaam cusub oo dakadu ku shaqayso; iyo • Kor u qaadida technoojiyada iyo amniga dakada
• Maalgalin aan ka badnayn $42 milyan • Xoojinta qaybta dakada ee ay maraakiibtu ku soo xidhaan; • Hagaajinta halka koontiirada iyo badeecadaha la dhigo.
• Maalgalin aan ka badnayn $210 oo milyan • Dhismaha 400 mitir( 400 metre quay); • Balaadhin 25 hectar ah (25 hectares yard extension); • 3 wiish ah oo ah nooca koontiinarada xambaara; • 7 wiish oo taayiro rabadh ah leh oo alaabaha xambaara
Muddada_Dhismaha_Dakada (Timing of the Construction)
Wajiga koowaad ee dhismuhu wuxuu bilaabmayaa 12 bilood ka dib marka heshiiska la saxeexo waxaana la rajaynayaa inuu lagu dhamaystiro inta u dhaxaysa 18 ilaa 24 bilood. Wajiga labaad wuxuu ku xigaa wajiga koowaad waxaanu ku dhamaystirmayaa 12 bilood. Wajiga saddexaad wuxuu bilaabayaa marka isticmaalka Dakadu gaadho 75%.
Dakadu way shaqaynaysaa inta uu socdo wajiga koowaad ee dhismuhu, lana carqadayn maayo habsami u socodka hawlaha dakada. Dhammaan Cashuuraha iyo dakhliyada kale ee Dawladu ka heshaana sidooda ayay u socon doonaan. Bixinta_Maalgashiga (Concession Payments)
Fee: Marka laga tago hantida dakada lagu maaligalinayo ee kor ku xusan, DP World waxay bixin doontaa $5 milyan oo kiro ah sanad maaliyadeed kasta taas oo
isugaynnoqonaysa$150 milyan 30-ka sanno ee muddada heshiiska. DP World maaliyadan waxay siinaysaa Dawlada Somaliland xattaa haddaanu dakhli ka soo baxin dakada.
10% Dakhliga Dakada: Marka laga tago $5-ta milyan ee kor ku xusan,Dawladu waxay heli doontaa 10% dakhliga guud ee ka soo baxa hawlaha ganacsi ee dakada inta aan kharashaadka ah laga jarin
Dakhliga ka soo Baxa Adeegyada Dakadu Fidiso: Dhammaan dakhliga ka soo baxa adeegyada badda la xidhiidha oo u dhigma 20% dakhliga guud ee dakada waxa qaadan doonta Dawlada Somaliland. Adeegyadan waxa ka mid ah hagida maraakiibta, jiidida maraakiibta iyo adeegyada la xidhiidha goobta doonyuhu ku xidhaan.
35% Faaiidada Xaasilka ah: Dawladu waxay sanad maaliyadeed kasta heli doontaa 35% faa’iidada xaasilka ee ay hesho Shirkada Maamusha Dakada Berbera.
Juwanada Galida: Dawladu waxa kale oo ay heli doontaa lacag $15 milyan ah: $10 milyan waxa toos loogu shubi doonaa khasnada dawlada dhexe $5 milyana waxa lagu bixin doonaa doonyaha maraakiibta jiida iyo doonaya ay adeegsadaan naakhuudayaasha maraakiibtu.
Tacriifada_Xoolaha_Nool (Livestock Tariff)
Dhaqaalaha Somaliland wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool. Qiyaas ahaan 60% dhaqaalaha dalku wuxuu ka yimaadaa xoolaha nool. Sidaas darteed, dhoofka xoolaha nool waxa la siinayaa muhiimada uu leeyahay, lamana kordhin karo tacriifadaha dhoofka xoolaha nool haddii aanay Dawlada Somaliland sidaas ogolaan.
Tacriifada_Kale (Other Tasiffa)
Shirkadda Hawl-gelinta Dekedda Berbera waxa ay labadii sannadba mar dib u qiimayn kartaa tacriifadda iyadoo wixii korodh ah kala tashanaysa dawladda
Waa qaybo kamid ah nuxurkii heshiiskii DP World ee laga ansixiyay golaha wakiiladda oo aan idinka soo minguuriyay nuxurkii heshiiska.